Jery ​​Apache OpenOffice sy ny Sidebarany vaovao. | Avy amin'ny Linux
Jery ​​Apache OpenOffice sy ny Sidebarany vaovao.
marianogaudix | | fampiharana, GNU / Linux
"Sneak peek" an'ny mpikirakira tontonana lafiny izay tonga vaovao ao Apache OpenOffice 4.0, izay efa niresaka tamin'ny fotoana iray isika.
Apache OpenOffice 4.0 amin'ny Ubuntu.
Apache OpenOffice 4.0 amin'ny Windows 7.
Raha misintona ny Apache OpenOffice 4.0 beta dia azonao atao amin'ny adiresy manaraka ity.
Ampidino ny Apache OpenOffice
Misy fonosana azo alaina ao:
Mazava fa ny fototra Apache dia nampiasa ny kaody Lotus Symphony, miaraka amin'ireo widgets nohatsaraina sy tranomboky vcl nosoratan'i IBM. Ny IBM dia nifototra tamin'ny OpenOffice tamin'izany fotoana izany, saingy nanala ireo tranomboky vcl tamin'ny alàlan'ny fanatsarana azy ireo ary manome fijery tsara kokoa amin'ny sisiny.
Ny kaody dia eo ambanin'ny fahazoan-dàlana Apache sy BSD. Noho izany ireo tranomboky sy fanatsarana (kaody voasoratra) dia tsy azo ampiharina ao amin'ny LibreOffice noho ny fifanolanana amin'ny fahazoan-dàlana, indrisy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Jery ​​Apache OpenOffice sy ny Sidebarany vaovao.
Ary ny rohy fampidinana dia tsy mankany amin'ny fisintomana, fa mankany amin'ny wiki OpenOffice Sidebar!
Etsy ambany no hahitanao ireo rohy fampidinana,
Miseho toy izao manaraka izao ny rohy fampidinana.
Ny hevitro dia tsy dia mampahazo aina ahy ny manana azy eo akaikiny toy ny hoe gimp na fivarotana sary io
Ny kaody miaraka amin'ny fahazoan-dàlana Apache sy BSD dia azo ampiasaina ao anatin'ny tetikasa GPL toy ny LibreOffice; ny tsy afaka mitranga dia ny mifamadika. Raha ny marina, ny kaody BSD dia azo ampiasaina ao anatin'ny tetikasan'ny tompona orinasa.
Raha ny fahalalako azy dia mandray zavatra avy amin'ny OpenOffice ny LibreOffice.
Heveriko fa mitovy izany! Tsy tokony hisy olana amin'ny fampiharana azy, ny fahazoan-dàlana Apache dia mitaky fotsiny ny fisian'ny fampandrenesana izay mampahafantatra ireo mpandray fa ny kaody miaraka amin'ny Lisansa Apache dia nampiasaina tamin'ny fizarana. Na ny asa derivative aza dia azo akatona eo ambanin'ny fe-potoana fahazoan-dàlana hafa.
Alefaso fanontaniana i Micheal Meeks.
ary ho hitanao izay lazainy aminao.
Raha ny marina, tsy dia ampy fahalalana ny mpanoratra an'ity lahatsoratra ity. LibreOffice, lisansa misy anao MPL / LGPL, dia afaka maka kaody avy amin'i Apache, raha Apache kosa tsy afaka maka kaody avy any LibreOffice.
Lainga iray hafa koa ny hoe "nanoratra widgets VCL sy" libraries "(sic)" i IBM. Izay manaraka ny manao ao amin'ny tahiry AOO dia ho hitanao fa misy kaody duplicate betsaka (ary ny sary mihetsika koa). Mazava ho azy fa mila atao ny fanadiovana fa miahiahy aho izany.
Fitoschido dia manome vaovao taloha momba ny Apache OpenOffice 3.6 ianao.
Izay nojeren'ny Micheal Meeks ary tsy nahita fiovana.
Izany no antony itovizan'ny Apache OpenOffice 3.6 amin'ny Oracle OpenOffice 3.4.
Fitoschido dia miresaka momba ny Lotus Symphony isika izay nisy widgets vaovao nanoratana sy nampiasana azy. Izay ao amin'ny Open Office 3.6 taloha dia tsy misy izy ireo ary tsy manana azy ireo koa ny LibreOffice.
Raha ny fahalalako azy dia mbola tsy nahita ny bokotra kahibem-baravarankely tao amin'ny libreoffice aho, ny toolpalletes, ny bokotra miloko, ny comboboxes Lotus dia tsy misy ifandraisany amin'ireo widgets LibreOffice.
Tsy ao amin'ny LibreOffice daholo ireo Widget naverina namerina ireo
Hitan'ny mpamorona LibreOffice fa mora ny manao ireo widgets ireo ho tsara tarehy kokoa, raha efa nisy tao LibreOffice.
Saingy tsy misy izany ao amin'ny LibreOffice.
Ireo tovolahy tao amin'ny LibreOffice dia naneho ahy ny API-ny ​​ary tsy mbola hitako ireo widget ireo.
Azonao atao ny manontany an'i Micheal Meeks.
Izy tenany ihany no nilaza fa Apache dia tsy mitovy filozofia amin'ny LibreOffice.
Ny fahazoan-dàlana ho an'ny tetikasa roa dia manamarika fisarahana.
Nilaza tamiko i Micheal Meeks fa tsy hahita fiovana mahery vaika amin'ny interface-ny ny LibreOffice, ary hitohy hatrany ny LibreOffice.
Efa 1 taona mahery izay no namoahana an'i Lotus Symphony ary ny LibreOffice dia tsy mbola niova fiovana mahery vaika tao amin'ny interface-ny nanomboka tamin'izay.
Tsy misy ifandraisany amin'ny fahafahan'ny LibreOffice mampiasa kaody BSD raha tiany izany. Tsy azoko izay tadiavinao iadiana hevitra.
Eny, ireo mpamorona LibreOffice noho ny fahasamihafana misy amin'ny tetikasa Apache sy ny fahazoan-dàlana.
Amin'izao fotoana izao dia tsy hampihatra kaody Lotus izy ireo.
Niresaka izany tamin'izy ireo aho noho ny fahalianana te hahafanta-javatra.
Nilaza tamiko ihany koa izy ireo fa ny fiovana ao amin'ny LibreOffice dia tsy ho goavambe toy ny amin'ny Apache OpenOffice 4.0 ary ny interface graphique dia hijanona ho mitovy amin'ny ankehitriny ihany. In LibreOffice
Toa ny sidebar an'i Calligra
Marina izany 😀 mitovy be.
Mampahatsiahy tanteraka ahy ny calligar 0.0 fa soa fa tetik'asa misokatra izy ireo hehehe
Izay no holazaiko, clavaito io.
Momba ny fifandraisan'ny fahazoan-dàlana, miankina amin'ny dikan'ny lisansa BSD izay ampiasainao izany. Mety marina ny mpanoratra.
Mhh mahaliana, saingy tsy hoe hitako fa tsara ilay interface, mbola tsy misy dikany ny haavony, tsy maintsy manakarama endrika izy ireo.
Mediocre dia teny tsotra be hilazana zavatra, farany, raha mitsikera ianao dia ataovy amin'ny fototra,
Ka moka, ary, ny interface dia tsy ratsy intsony, manatratra caligra fotsiny izy, taorian'ny fotoana fohy taorian'ny nahaterahan'ny openoffice hatramin'ny taona maro lasa izay ...
Andao andramo izany ary ho hitantsika ny fandehany ..
Na dia tiako kokoa aza ny Libreoffice!
Andramako izany, na dia ao an-tsaiko aza ny marika OpenOffice dia efa nopetahana.
Izaho koa dia miaraka amin'ny LibreOffice, manampy ny LibreOffice araka izay vitako aho.
Manamboatra fonosana kisary tsy ofisialy ho an'ny LibreOffice, miorina amin'ny Faenza aho.
Sariohatra tena tsara, nandramako izy ireo ary izao dia toa tsara lavitra noho izao ny libreoffice -ko.
Misaotra tamin'ny fotoananao sy ny fanoloran-tenanao.
Fiarahabana avy any Chile.
Tongasoa ianao, hiezaka ny hanao izay rehetra azo atao aho mba hanatsarana ny vondron'olona rindrambaiko maimaimpoana.
na dia amin'ireo sary masina tsotra ireo aza.
fizahan-toetra dia hoy izy:
Misaotra betsaka. Rehefa mandeha ny fotoana dia hanandrana azy ireo koa aho, afaka manome fotoana faharoa
Valio ny provando
LibreOffice dia manaraka ny filozofia misy rindrambaiko maimaim-poana, fa ny Apache Open Office kosa manaraka ny an'ny loharano misokatra. Noho izany ny fahasamihafana misy eo amin'izy ireo, na dia hita aza fa ny Apache Open Office dia mampatsiahy ahy ny Office XP rehefa nivoaka izy io.
Miarahaba an'ireo mpampiasa Apache Open Office, satria na eo aza ny fizotry ny fivoarana miadana dia asehon'izy ireo fa te handresy lahatra ireo mpampiasa MS Office izy ireo fa ny loharano misokatra dia mahomby tahaka ny lozisialy loharanom-baovao mihidy.
gallaecia dia hoy izy:
Te hanandrana aho, misy mahalala ve raha azoko atao ny mametraka azy mifanitsy amin'ny LibreOffice amin'ny Ubuntu 12.04?
Mamaly an'i Gallaecia
Eny, raha mbola misintona azy avy amin'ny tranonkala ofisialy ianao. Ity no nataoko tamin'ny libreoffice 4 ary tsy nanana olana tamin'ny fonosana "swap" aho.
Nametraka Lotus Symphony nandritra ny fotoana kelikely aho mba hahafahako manitsy antontan-taratasy maro miaraka amin'izay satria toa nahafinaritra ahy kokoa izany satria manokatra azy ireo amin'ny varavarankely iray ihany fa amin'ny takelaka na inona na inona takelaka na antontan-taratasy.
Mampalahelo fa tsy nitazona an'io endri-javatra io ny Apache Open Office ... hahafinaritra izany 😛
Nanantena aho fa ny zavatra mitovy amin'ny Apache OpenOffice 4.0 dia hitovy kokoa amin'ny Lotus Symphony.
Ny tsy fitoviana eo amin'ny Line sy Whatsapp.
Mihoatra ny alaina 130 tapitrisa ny tsipika.